သိစေချင် သည် - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home Unlabelled သိစေချင် သည်
mmitdeveloper at 2:07:00 PM
Anonymous October 27, 2013 at 2:16 PM
Unknown October 27, 2013 at 2:56 PM
သည်းခံပါ အကို ကျွန်တော်ကတော့ အားပေးနေမယ်
Anonymous October 27, 2013 at 3:04 PM
Unknown October 27, 2013 at 3:13 PM
အကို ရေ အပင်မြင့်လေ လေတိုက်ခံရလေဆိုတာ သိပ်မှန်တယ်အကို စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့
မပြည့်တဲ့ အိုးက ဘောင်ဘင်ခက်နေမှာဘဲ လေ ...အကို ကျွန်တော်တို့ အားပေးနေပါတယ်
ကိုမလုပ်နိုင်ဘဲ ဝင်ပြောရဲတာ ရှက်တက်ရင်သေလောက်တယ် အကိုရေ......
Unknown October 27, 2013 at 3:14 PM
နည်းပညာတွေစုပြီး star လုပ်ထားတယ်
သီးခံပါ ဒို့ အတွက်အသုံးဝင်တယ်thank.
Htu Ra October 27, 2013 at 3:21 PM
နားလည်ပေးလိုက်ပါဗျာ တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း ဘမျိုး ဘိုးတူ ဘေးပဲထိုင်ပြောတတ်တဲ့လူတွေရဲ့ ဖျောက်မရတဲ့အကျင့်ဆိုးတစ်ခုကြောင့်ပါ။
Unknown October 27, 2013 at 4:08 PM
Forget about that stupid person.
Somebody know how to blame only.Because they cannot do them self.
I always appreciated your post and blogs and thanks for your knowledge.
Keep it up Bro!!!!
MMTKS October 27, 2013 at 4:46 PM
အဲဒီလို ပြောတဲ့လူဟာ စေတနာနဲ့ မထိုက်တန်
တဲ့ လူပါ သူဒီလောက် တတ်နေရင် သူများ
တွေလို လုပ်ပါလား။ အများအကျိုး အတွက်
လုပ်နေကြသူ အချင်းချင်း ကျွန်တော်လည်းခံ
စားရပါတယ်။ တနေ့ စေတနာ ရောင်ပြန်ဟပ်
ကိုကြီးပေါက် blogger ကို ဆဲတယ် ဆိုတာ မျိုးမစစ်လို့ပါ သူအရမ်းတတ်သိနားလည်နေရင် ကိုယ့်သုံးမယ့်ဟာ ကိုယ်ရေးပေါ့ ပြီးတော့ Comment ဆိုတာ ဘာရေးရတာလည်း လို့ လိုက်မေး လိုက်အုံးလို့ '''''နည်းပညာဆိုတာ လူကလုပ်လို့ မပြည့်စုံနိုင်ဘူး ဒါကို သိ့ထားသင့်တယ် ကိုကြီးပေါက် ကြိုစားထား နည်းပညာအလင်း အစဉ်သဖြင့် တိုးတက်ပါစေ
Unknown October 27, 2013 at 7:36 PM
ကိုပေါက် ညီးလည်စိတ်မကောင်ပါဘူး ကိုယ်လုပ်တဲ့(နည်းပညာ)တွေးကလူးကြီ လူငယ်အတွက်
အကျိုးရှိတဲ့ အလုပ်လုပ်နေတာဘဲ မဟုတ်တာ လုပ်နေတာမှမဟုတ်တာ ခွင်လွတ်ပေပါအစ်ကို
(နည်းပညာ)လေလာနေတဲ့ သူငယ်ချင်းကလည် အသိဥာဏ်းတအားနည့်လိုဖြစ်မှာပါ ကိုပေါက်
အဲးသလိုပဲ ကိုပေါက် ကျွန်တော်တို့ လဲး ကိုပေါက်နဲ့ အတူး စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ် ကိုပေါက်
ကိုပေါက်ဆိုဒ်ကိုယ် တစ့်နေ့၃။၄ခေါက်လောက်အမြဲရောက်ပါတယ်အစ်ကို ဒီလောက်ပါပဲ အစ်ကို
Pyae Thaw (နည်းပညာ) October 27, 2013 at 9:10 PM
အကိုရာ။ မေ့ထားလိုက်။ အကိုလည်း လူတော်ကြီးပဲ။ ကြိုးစားပါ။ မဖြစ်နိုင်တာမရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်လာအားပေးသွားပါတယ်ဗျာ။
Pyae Thaw - http://www.pthaw.com
htwe naing October 28, 2013 at 3:24 AM
ကိုပေါက် ရေ ဘာမှစိတ်မညစ်ပါနဲ့ ဒါတွေက blogger တွေအတွက်ရိုးနေပါပြီ ကျွန်တော်တို့လို blogger ပေါက်စတွေ မပြောနဲ့ ကိုညီနေမင်းတို့ ကိုနေမင်းမောင် တို့တောင် အဆဲခံရတာတွေ ကျွန်တော် ဖက်ဖူးပါတယ် ကျွန်တော်တို့ အားပေးနေပါတယ်
ထွေးနိူင်ဝင်း - http://www.htwenaingwin.blogspot.com
Unknown October 28, 2013 at 8:23 AM
အထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးအစ်ကို သံသရာမှာ ပညာပြည့်ဖို့ ဒီခွေးချီးပုံနင်းမိတာနဲ့ နောက်ပြန်လှည့်မသွားပါနဲ့ ရှေ့ဆက်ဖို့ အားဘဲမွေးပါ အဲဒါတွေစိတ်ထဲမထားပါနဲ့နော်
Unknown October 28, 2013 at 11:18 AM
ညီလေး ever အားပေးနေမှာပါ အစ်ကို
Unknown October 28, 2013 at 11:56 AM
ဘဝမှာ﻿တော့ ဒီလိုဘဲပြဿနာ﻿ပေါင်းစုံ ကြုံရတတ်﻿ပါတယ်﻿။ဒါကို အားမ﻿လျော့ဘဲဆက်﻿လက်﻿ကြိုးစားပါ။အမြဲတမ်းအကိုဘက်﻿ကရပ်﻿တည်﻿ပေးပါ။
အစ်ကို သည်းခံလိုက်ပါ...လမင်းကို ခွေးကဟောင်တော့ကောဘာမှမထူးပါဘူးဗျာ......လမင်းကလင်းမြဲသာမြဲပါပဲ.......အစ်ကို အခုထက်ပိုပြီးနည်းပညာတွေဝေငှနိုင်ပါေ...ပိုပြီးလည်းအောင်မြင်ပါစေ............
Myanmar IT Sky October 28, 2013 at 4:54 PM
အကိုရေ... စိတ်မကောင်းဘူးဗျာ. ကျွန်တော်တို့အားလုံးဘ၀တူတွေဆိုတော့ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်.. အမြဲတမ်းအားပေးနေပါတယ်.. ဘလော့ဂါတွေရဲ့ဘ၀ကိုသူတို့မသိသေးလို့ပါဗျာ.အားပေးနေ တဲ့သူတွေအတွက်ဆက်ပြီးကြိုးစားသွားပါဗျာ.
Unknown October 28, 2013 at 5:55 PM
ကျွန်တော်လည်း တော်တော်လေး စိတ်မကောင်းဖြစ်မိ ပါတယ်ဗျာ... မေတ္တာသာ ထားပေးလိုက်ပါ အကိုရာ.... ကိုယ့်စေတနာ ကကိုယ့်ကိုအကျိုးပြုပါလိမ့်မယ်... ဒီလိုလူမျိုးအတွက်နဲ့ စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေရင်လည်း ... သူ့ကအောင်ပွဲခံနေလိမ့်မယ် .... အကိုရေ.. စိတ်မကောင်းဖြစ်မဲ့အစား.. နွားနို့တစ်ခွက်နဲ့ ငှက်ပျောသီးတစ်လုံးစား ပြီးရင် တရေးလောက်အိပ်လိုက် .... နိုးလာရင် နေ့သစ်ကိုကောင်းကောင်း ဖြစ်သန်းနိုင်ပြီလေ...
အစ်ကို့ ကိုလာအားပေးသွားတဲ့ ညီ..... ငြိမ်းချမ်းသူ ... http://nyeinchanthu3.blogspot.com/
just fighting & never give up
Unknown October 28, 2013 at 9:08 PM
အကိုပေါက် စိတ်မကောင်း မဖြစ်နဲ့...အဲဒီကောင်ကို ကိုပေါက် အစား ကျွန်တော် ပြောပေးမယ် ဖုန်းအစုတ်ကိုင်ပြီး အကုန်လုံး လုပ်ချင်ရင် ဖင်ခံလိုက်။
Unknown October 28, 2013 at 9:11 PM
Unknown October 28, 2013 at 10:46 PM
ကို aung zin oo ပြောတာကိုထောက်ခံပါတယ်ကိုပေါက်ရေ သူတို့ပြောတာတွေကိုခေါင်းထဲမထားပဲကိုယ်လုပ်စရာရှိတာသာဆက်လုပ်ပါကိုပေါက်ကျွန်တော်လည်းအမြဲတန်းအားပေးနေမှာပါ လူဆိုတာချီးမွန်းလည်း ၇ရက်ပဲကဲ့ရဲ့လည်း၇ရက်ပါပဲကိုပေါက်ရေ.....
Anonymous October 29, 2013 at 8:19 AM
စိတ်မကောင်းပါဘူး ရင်ထဲမထားပါနဲ့ဗျာ ဒီလို ဟာများ
MyatMinTun October 29, 2013 at 2:12 PM
MyatMinTun October 29, 2013 at 2:15 PM
MyatMinTun October 29, 2013 at 2:17 PM
IDM ( Internet Download Manager ) 6.36 Build2Full
Adobe Premiere Pro CC 2020 14.0.1.71 Full Version For Windows 64 bit
Adobe After Effects CC 2020 v17.0.2.26 Full
Blog Archive February (1) January (1) December (1) November (1) August (3) July (4) June (3) May (7) April (10) March (3) February (6) January (3) November (3) October (21) September (13) August (2) July (2) June (1) May (5) December (7) October (3) September (3) August (8) July (10) June (1) May (24) April (35) March (6) February (2) January (9) December (28) November (7) October (1) September (6) August (10) July (23) June (26) May (11) April (11) March (16) February (14) January (10) December (10) November (28) October (19) September (15) August (18) July (54) June (45) May (32) April (60) March (57) February (54) January (54) December (35) November (40) October (35) September (24) August (89) July (61) June (34) May (61) April (27) March (39) February (48) January (84) December (68) November (51) October (23) September (19) August (30) July (13) June (19) May (5) April (7) March (18) February (136) January (37) December (44) November (29) October (50) September (72) August (45) July (48) June (35) May (27) April (30) March (28) February (8)